September | 2007 | Layma's World
Posted on September 21, 2007 by layma
မျက်ရည် … တွဲလဲ …။အချမ်းရယ် … ပို
Filed under: Poem |	3 Comments »
Posted on September 12, 2007 by layma
ပျောက်နေတဲ့ … ပေါက်ပေါက်ဆုပ် ကလေးက … ဒီလို လေး Tag ထားကြောင်း ..လာအော်သွားတော့ ဆောင်းကို ခြေရာခံလိုက်မိတယ်…။ နှင်းပွင့်လေးတွေမရှိလို့… နေခြည်တန်းလေးတွေနောက်ကို … နောက်ယောင် ခံလိုက် တော့ … သူတို့ လာဖို့… နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ “ဆောင်း” ကိုတွေ့ လိုက်ရတယ်…။ “ဆောင်း” က ပြောတယ်…သူသိပ်ချမ်းနေတယ်တဲ့ … ။
နှင်းတွေဝေတဲ့ ဆောင်းမနက်ခင်းတစ်ခုမှာ နှင်းပွင့်လေးတွေလို မဖွေးတဲ့ … “လေးမ”ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး…လူ့ လောကကြီးထဲကို ရောက်ခဲ့တယ်…။ ဆောင်းအိပ်မက်တွေ ( ဂယောက် ဂယက် အိပ်မက်တွေ ) … မက်ဖို့လောကကြီး ထဲကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ တိုးဝင်လာခဲ့တယ်…။
ရန်ကုန်ဆောင်းကို အနွေးထည်ပါးပါးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့လို့မန္တလေးဆောင်းကို အနွေးထည်ထူမပါပဲ တိုက်ပွဲဝင်လိုက်ရတယ်… အမေ (သို့ မဟုတ်) “ငွေ” အမြန်လာပါ...လို့သံချောင်းခေါက် လိုက်ရတယ်…။ မေမေ ၀ယ်ပေးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်က ဆွယ်တာရောင်စုံ သိုးမွှေးဦးထုပ်နဲ့ရှိုးပေးချင်ပေမယ့် အသားပတ်တော့ ခေါင်းငုံ့ ထားရတယ်…။ “ဆောင်း”တွင်းမှာ စောင်ထဲကမထွက်ချင်တဲ့ ရောဂါက အတော်ဆိုးတယ် …။ အတန်းလဲ မတက်ချင်ဘူး … စောင်ထဲမှာပဲနေချင်တယ်….။ အားတင်းပြီးအပြင်ထွက် လိုက်တော့လဲ .. နွေးသွား တာပဲ…။ နေက ပြင်း လှသည်လေ …။
မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၉၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်က… သိပ်အေးတဲ့ ဆောင်းပဲ … ပိတ်ရက်ဆိုတော့ … ရတနာပုံ မှာ တိုက်ကား သွားမောင်းဖို့… သူငယ်ချင်း ၃ ယောက် … ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ထွက်ခဲ့တယ်… ။ ထွက်ကတည်း က “မိ” နဲ့ကတောက်ကဆ ဖြစ်ပြီး … စိတ်က သိပ်မကြည်ဘူး … ။ ပုသိမ်ကြီး အကျော်လောက် ရောက်တော့ ဆိုင်ကယ် ၂ စီးဘေးက လိုက်လာပြီ….။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ကောင်မလေး ၃ ယောက်စီးတော့ အစ ခံရပြီပေါ့… ။ စရင်းစရင်း ခေါင်းစည်းအပြာလေး … စီးထားတဲ့ “လေးမ” ကို “အလယ်ကအဒေါ်ကြီးက ဘယ်တုန်းက ခေါင်းပေါက် တာတုန်း…” လို့ လဲ ဆိုရော … လက်ထဲက … စားလက်စ “ဆမူဆာ” နဲ့လှမ်းပေါက် လိုက်တယ် … ။ အဲဒါအကြီးအကျယ်မှားတာပဲ … ဘော်ဒါတွေဖြစ်သွားကြရော … ဘယ်လို ဖြစ်သွားတာလဲ…သိချင်လား… ပြောပြဘူး ….။ ဒီလိုနဲ့အစ်ကိုသူငယ်ချင်း ၄ ယောက်ရခဲ့တယ်…။ မန်းလေးမှာ ကျောင်းတက် ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း … ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းဆိုလို့ …. ဒီ ၄ ယောက်ပဲ …. ဒါအကုန်ပဲ ….။ “တာရာပွကြီး” ဖတ်ပြီး “တခွိခွိ”ရယ်တတ်တဲ့အရွယ်မှာ . “နှလုံးသား အာဟာရ ” နဲ့ “ကုတ်အကျီင်္(ဘာသာပြန်)” ကို သူတို့က … လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်… ။ သူတို့ ပြောပြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ … “နေတိုးအဖွဲ့ ” ဆိုတာလဲပါတယ် … ။ သူတို့က ပြောတယ်…. “ ညည်းတို့ က…. ဒို့ ညီလေးတွေ လိုပဲ ” တဲ့ ….။ နောက်တစ်နှစ် ဆောင်းရောက်တော့ … “ ညည်းတို့အဆောင်ရှေ့ ဂစ်တာလာ တီးမယ်…” ဆိုပြီး … ညဘက်ကြီး … ဆိုင်ကယ် တတီတီ နဲ့ ရောက်လာတယ် … “ ၀ို့ …ဒီဇင်ဘာ….” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ဆောင်းညကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်….။ “လေးမ” တို့ ၃ ယောက်ကတော့ … ၀ရန်တာမှာ မီးပိတ်ပြီး … ဖျာလေးခင်း စောင်လေးခြုံလို့… ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီး အားပေးခဲ့ကြတယ် … မိုးလုံးမှိုင်း. .. ရွှေတောင် ပံ. … ဟန်နီ…စတဲ့ သီချင်းကောင်းလေး တွေကို … ဂစ်တာသံ သန့် သန့် နဲ့… သံပြိုင်အော်သွားကြတာ ..ဒီနေ့ အထိ မှတ်မိ နေတုန်းပဲ …။ ဒါက မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆောင်းတွင်း အိပ်မက်တစ်ခုပဲ ….။
အဲဒီနေ့ က လပြည့်နေ့ မရောက်ခင်တစ်ရက်အလို …။ မီးရှူးမီးပန်းတွေ အမျိုးမျိုးကို တပွေ့ တပိုက်ကြီးပိုက်ပြီး “သူ” ရောက်လာတယ်…. မီပန်းတွေအတူတူလွှတ်ကြတယ် … မီးကျည်တွေက ရင်ထဲမှာလဲ … အပြင်က မီးပန်းတွေနဲ့… အပြိုင်အဆိုင်ပဲ …။ မီးပုံးပျံလေးကို မီးတိုက်ကြတယ်… မှိုင်းဝအောင်စောင့်ရင်း မီးပုံးပျံကို … ကိုင်ထားတဲ့ လက်ဖျားတွေက … တဆတ်ဆတ်တုန် နေခဲ့တယ် …။ တအိအိတက်သွားတဲ့ … မီးပုံးပျံလေးနဲ့ အတူတူ… လူကလဲ မိုးပေါ်မှာ မြှောက်နေသလိုပဲ … ။ စိတ်နဲ့ လူနဲ့ မကပ်ပေမယ့် … ခဏခဏပြုံးပြမိတယ် … မကြာမကြာဆုံတဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံကို ရှောင်လွဲရင်းနဲ့ခိုးကြည့်မိတယ်….။ အဲဒီလို သိပ်ကို သိမ်မွေ့ ကဗျာဆန် နေတဲ့ အချိန်မှာ … ရင်ခုန်စရာ မကောင်းလိုက်ပုံက… အဖျက်သမား “မိ” က … ပြောင်စပ်စပ်မျက်နှာနဲ့… ဘေးမှာ ရှိနေတယ်….။ အဲဒီလိုညမျိုးတွေသာ … ပြန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် …“မိ”ရေ… ငါ့အိပ်မက်ထဲမှာ နင်လဲပါလို့ရ ပါသေးတယ်…။
ဆောင်းတွင်းအိပ်မက်တွေကနေ … လန့် နိုးလာတော့ … ဆောင်းကုန်သွားပြီ …။ နောက်နှစ် ဆောင်းတွေ ရောက်တိုင်း … ဆောင်းအိပ်မက်တွေ ကတော့ မက်နေရဦးမှာပဲ … ။ ။
ဆောင်းကိုဆက်ချမ်းသင့်တဲ့ သူများကတော့ …
အားတဲ့အချိန် … ရေးချင်စိတ်ရှိတဲ့အချိန် …ရေးပေးပါရှင် …။
Filed under: Link to the past, Tag |	15 Comments »
Posted on September 3, 2007 by layma
ရေးပြီးတဲ့ထဲက … အကြိုက်ဆုံး ၅ ပုဒ်ကို … ပြောပါလို့…ကိုဘုရင့်နောင်က … ဒီလို Tag လို့… ဟောဒီလို လေး … ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ … ။ ဒါပေမယ့် … အမြော်အမြင်ကြီးမားတဲ့ “လေးမ” က … မေ၊ ဇွန် ၊ဇူလိုင် ၃ လစာထဲက ရွေးပါတယ် …Aug ထဲကနောက်တစ်ခေါက် ရွေးပါမယ်လို့… ရေးခဲ့ပါတယ် … ( အမှန်တော့ အမြော်အမြင်ကြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး … နောက် ၃ လလောက်နေရင် … ဘယ်သူမှ မရေးခိုင်းလဲ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် ရေးမလို့ ။ ) အခုတော့ ခင်မင်ရသော….မလေးက ဒီလို tag သောကြောင့် Aug လမှာရေးခဲ့သမျှထဲက အကြိုက်ဆုံး ၅ ပုဒ် ကိုရွေးပါမယ်…။
(လေးမရဲ့ Blog လေးဖြစ်တည်မှုကို label ၁၂ ခု ၊ post ၄၈ ပုဒ် ပြည့်တဲ့ နေ့ က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါ…)
( လောကမှာ “သနပ်ခါးပန်း” နဲ့ တူတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းလေးပါ…)
( အရူးသုတေသန စာတမ်းပါ…)
( ကိုမိုးညိုရဲ့ မှတ်ချက်က စကားကိုပြန်သုံးရမယ်ဆိုရင်… ၁၃ ကွာတဲ့ အလင်းပါ … နောင် အသက် ၄၅ ကျော်ရင် အလင်းကပြောင်းနိုင်ပါသေးတယ် …)
( သီချင်းက အကြားအာရုံကတဆင့် … နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါ … ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပဲ့တင်သံကို … ဝေမျှထားပါတယ်…)အရင်တစ်ခေါက်က လူ ၁၂ ယောက်လောက်ကို ဒုက္ခပေးပြီးပြီဖြစ်လို့ … ဒီတစ်ခေါက်တော့ တစ်ယောက်ကိုပဲ အလုပ်ပေးပါတော့မယ်….။
“တေလေသီတဲ့သက်ငြိမ်တေးသွားမှာ……ငါတို့တွေ …..ပွား များ သက် ၀င် နေဦးမယ် …” လို့ကိုငှက်ကို လွမ်းပြတဲ့ ကဗျာဆရာ ၊ “သားကြီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲ” လို့ မေးပြီး … သီရိမင်္ဂလာဈေးထဲကို ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ ရာသီဥတုအုပ်စုထဲက ရဲရဲဖြူတဲ့ Blogger ကို Tag ပါတယ်….အားရင်ရေးပေးပါရှင် ….။
Posted on September 2, 2007 by layma
၁၁ နာရီစမယ်မှန်း သိပေမယ့် …ဘာတွေရှုပ်မှန်းမသိအောင် ရှုပ်နေလို့ …၁နာရီထိုးမှ ရောက်သွားပါတယ် ။ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ၀ါးတီးအစီအစဉ်က ပြီးသွားပြီ… ကော်ကော်လဲ မသောက်လိုက်ရတော့ဘူး … ။ သူများတွေ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ … စာအုပ်ဝါ၀ါလေးလဲ မရတော့ဘူး… ။ ယောင်လည် ယောင်လည် … ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ … ၀င်သွားတော့ …Plastic sheet အဖြူကြီးနားမှာ …လူတွေတပြုံကြီး တွေ့ တယ်…။ စာအုပ်ထဲမှာ ကူးရေးတဲ့ သူတွေကကူးရေး …၊ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေက ရိုက်ဆိုတော့… ဘာတွေများရေးထားလဲ အနားတိုးကြည့်လိုက်တော့ …Oh….my god !! Blogger တွေရဲ့ အော်တိုတွေပါလား… စာသားတွေပါတယ်… လိပ်စာတွေ ပါတယ် … လက်မှတ်တွေ ပါတယ် …။ ဘယ်ရမလဲ … “လေးမ” လဲ လူရှင်းအောင်စောင့်ပြီး …ကမန်းကတန်းလေး ကောက်ခြစ်ပြီး … ခြေရာလက်ရာ ချန်ခဲ့တာပေါ့ …။ ဒုတိယပိုင်းစပြီတဲ့…..
ခပ်မှောင်မှောင် ပါးပါး အရိပ်တစ်ခု… တိုက်ပုံတလွှားလွှားနဲ့… စင်ပေါ်တက်လာတယ်….။ ကိုစေတန်ဂေါ့ဒ် ပါ …။ သူပြောတာတွေ နားထောင်ရင်းနဲ့… ရေငတ်လာတယ်… စာမေးပွဲတဖက်နဲ့အတော်အားထည့် ထားပုံပဲ … သူက ပြောသင့်တာတွေ ပြောပြီး ပြန်ဆင်းသွားတယ်…။
တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေ အလှည့်ရောက်ပြီတဲ့ … မေးတော့မယ်တဲ့ …။ မိုက်ကြီးနဲ့လူကြီးတစ်ယောက် …ရယ်လို့ မောလို့… ။ သေချာအောင် နောက်နားက… blogger ညီမလေးကိုမေးကြည့်တော့… ကိုစိုးဇေယျ တဲ့ … လိပ်စာလေးတောင်ပြောပြလိုက်သေး … ။
“Blog ရှိလား… အော်… မရှိဘူးလား … ဒီပွဲအကြောင်း ဘယ်လိုသိပြီး ရောက်လာ တာလဲ … သူငယ်ချင်းက ဘယ်သူလဲ … Blog လိပ်စာလေး ပြောပေးပါဦး … ကျောင်းသားလား… ဘာလုပ်လဲ …”
ဒီလို…ဒီလိုတွေ …တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မေးလာလိုက်တာ…. ဘုရား….ဘုရား…အနားရောက်လာပြီ… “လေးမ”ကို… အာရုံမကျပါစေနဲ့ … လက်ဖျားတွေတောင် အေးလာတယ်… မေးလာရင် Blogလိပ်စာ ပြောရတော့မယ် … ပြောလိုက်ရင် …လူကြားသူကြားထဲ ….“လေမန်း”လို့ ခေါ်လိုက်ရင် အရှက်ကွဲတော့မယ်…ထပြန်ရင် ကောင်းမလား … ခေါင်းငုံ့ ပြီး …အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တာ… အဲဒီသတင်းထောက်ကြီး ဟိုဘက်လွှင့်သွားရော ….။ တော်ပါသေးရဲ့ … ။
မမယ်လိုဒီမောင်ကတော့ … ကြော့ကြော့မော့မော့လေး…အရွှန်းဖောက်လို့…အကျိုးအပြစ်တွေ သုံးသပ်ပြသွားပါတယ် … ။ Blog လိပ်စာထည့်ရိုက်ထားတဲ့ …လိပ်စာကဒ်လေးကိုလဲ ကြွားသွားသေးတယ်…။မမောင်ရဲ့ သံစဉ်တွေပြီးတော့ … ဖြူဖြူ ပါးပါး ရှည်ရှည် အရိပ်တစ်ခု …တက်လာပါတယ် … ကိုမျက်လုံးပါတဲ့ … သူကတော့ ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်နဲ့… စကားတွေ အများကြီး ပြောသွားပါတယ်… ။ Blog လေးတစ်ခုလဲ လက်တွေ့ ဖန်တီးပြသွားပါတယ်…။
သိလိုသည်များကိုပြန်ဖြေတဲ့ အစီအစဉ်မှာတော့ … နာမည်ကြီး blogger တွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အာခြောက်အောင် ဖြေသွားကြပါတယ် … ။ ကပ်သီးကပ်သပ် အမှန်အကန်မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို တာဝန်ကျေကျေ ဖြေသွားကြတာ ချီးကျူးစရာပါ …..။
Cameramen တွေကလဲ …ရိုက်သလား … မမေးနဲ့… ရှေ့က ရိုက်လိုက်…နောက်က ရိုက်လိုက် …ဘေးက ရိုက်လိုက်… ခုံပေါ်တက် ရိုက်လိုက်နဲ့ ….။ နောက်မှပဲ သူတို့ ဆီမှာ … ပုံတွေသွားကြည့်ရဦးမယ် …။ ကိုသန့် ဇော်မင်း ကလဲ လက်ထဲက ကင်မရာလေး တဖျပ်ဖျပ်နဲ့ … လက်စွမ်းပြနေတယ် … ဘက်ထရီ အားပြည့် မပြည့်တော့ … ကာယကံရှင်ပဲ သိမှာပေါ့လေ …။ ဓါတ်ပုံလေးရိုက်ရင်း ဘေးက ဖြူဖြူသေးသေး ညီမလေး ၂ ယောက်နဲ့ လဲ … စကားလက်ဆုံကျ နေလိုက်သေးတယ် … သူတို့ ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ အခုတလော လူကြည့်အများဆုံး Blog တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ် … ကိုသန့်ကတော့ တစ်ခေါက်ပဲသွားပြီး …. နောက်မသွားတော့ဘူးဆိုလား…. သိပ်တော့မကြားလိုက်ပါဘူး ….။ သူတို့ အုပ်စုထဲမှာ … အနှင်းလို့ ခေါ်တဲ့ မနှင်းမိုးဝေလဲ ရှိတယ် ထင်ပါရဲ့…။
၃ နာရီခွဲကျော် သွားပြီ … ကိုစေတန်ဂေါ့ဒ် က မေးခွန်းတွေကို ဖြေနေရတုန်း …။ ဗိုက်က အတော်ဆာလာပြီ… “လေးမ”တစ်ယောက်ထဲ ဆာတာမဟုတ်ဘူး… ဘေးက blogger ညီမလေးဆီကလဲ ….ဂွီ..ဂွီ… တဲ့ အသံကြား ရတယ် … “လေးမ” လဲ အသံမထွက်လာခင် အမြန်ပြန်မှ … ဆိုပြီး ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်ကို မစောင့်တော့ဘဲ ထပြန်လာခဲ့ပါတယ် ….။
၁။ Blog စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်ရရှိသော အကျိုးအမြတ်များကို လှူဒန်းသောအခါ … တစ်နေ့ လျှင် နာရီ ၂၀ blog ရေး၍ ၄ နာရီသာအိပ်သော ကိုညီလင်းဆက်ကို အက်ပီတွန်ဝိတ်ဂိမ်း နှင့် ကိုစေတန်ဂေါ့ဒ်ကို ကယ်လီစပွန်လှူဒါန်းသင့်….။
၂။ ညီမလေး ဘာညာမှလွဲ၍ … အခြားသော blogger များ … လေထန်သော ကွင်းပြင်တွင်… တစ်ယောက်ထဲ မနေသင့် …။
Myanmar Bloggers Society ဆိုတဲ့ အသိုက်အမြုံလေး … ခုလိုပဲ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့အဓွန့်ရှည်ပါစေ….။
လူငယ် များရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ … ပညာတွေ … မျှဝေပေးလိုမှုတွေ … လွတ်လပ်စွာ အတောင်ဖြန့်လို့ပေါ့ပါးစွာပျံသန်းနိုင်ကြပါစေ ….လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဆုတောင်းရင်း … စက်တင်ဘာ ၁ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Why Do We Blog ? ဆိုတဲ့ ပွဲလေးကို မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်ရှင် ….။ ။
P.s. သက်ဆိုင်သူများစိတ်မဆိုးကြေး….. စိတ်ဆိုးတဲ့သူ မုန့် ဝယ်ကျွေး….ပုံတွေကို ဒီမှာ နဲ့ ဟောဒီမှာ…ပဲသွားကြည့်တော့နော်..။